Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) - Hello Sayarwon
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ)
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ကဘာလဲ။
အသည်းပြည်တည်နာဆိုသည်မှာအသည်းတွင် အပေါက်သေးများဖြစ်ကာ ပြည်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အ သည်းသည် စွမ်းအင်၊ ပရိုတိန်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်မှ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းစသောလုပ်ငန်းများစွာဖြင့် အရေးပါသောကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။ အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်ပါက ပြည်များဖြင့် အ ပေါက်ငယ်များပေါ်လာပါသည်။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရောဂါသည် အပူပိုင်းဒေသတွင် နေထိုင်သောလူများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ ရောဂါသည် အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများရောတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသောအချက်များကိုလျော့ချ ခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါ၏ မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါစေရောဂါလက္ခဏာများသည် ချက်ချင်းမပေါ်လာပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပါကအဖျားတက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ် ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၏ အပေါ်ပိုင်းညာဘက်တွင် နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြားအဖြစ် နည်းသောရောဂါလက္ခဏာများလည်းရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာရင်ဘတ်နာခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်နည်းခြင်း၊ အရေပြားနှင့် မျက်စိအဖြူသားများ ဝါခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသောအခြားလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟုစိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဆက်တိုက် အဖျားအလွန် တက်ခြင်းစသောလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ပါကဆရာဝန်အားခေါ်ပါ။ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ရောဂါ အ ခြေအနေချင်းမတူပါ။ ရောဂါအဖြေရှာရန် နည်းလမ်းများ၊ ကုသခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတန်းတိုင်ပင်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုရယူပါ။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသည်းပြည်တည်နာ ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများကိုအဓိကအားဖြင့် ၃မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။
ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောအသည်း ပြည် တည်နာ။
အမီးဗားကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းပြည်တည်နာ။ အဓိကအားဖြင့် Entamoebahistolytica ဖြစ်သည်။
မှိုကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းပြည်တည်နာ။ အများစုမှာ Candida မှိုဖြစ်သည်။
ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းပြည်တည်နာကို pyogenic liver abscess ဟုခေါ်သည်။ အူအတက် ရောင်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း၊ အူမကြီရှိ အဖတ်များရောင်ခြင်းစသောရောင်ရမ်းသောအခြေအနေများသည် အသည်း ပြည်တည်နာကို ဖြစ်စေသည်။
အမီးဗားကဲ့သို့ အင်းဆက် ကပ်ပါးများသည်လည်း ပြည်ထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အများစုသည် သန့်ရှင်းရေးနည်းပါးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အသည်းပြည်တည်နာအဖြစ် များပါသည်။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသည်းပြည်တည်နာ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်တက်စေသောအချက်များစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-
ဘေးကင်းစိတ်ချရမှု ထောက်ခံချက် မရှိသောအစာများစားခြင်း
လိင်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဖြစ် နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။ သို့သော် အချိုးအစားမှာ တ အားမကွာခြားပါ။
အသက်။ အသက် ၆၀-၇၀ တွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားသည်။ အသည်း ပြည်တည်နာသည် မွေးကင်းစကလေးများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ချက် သွေးပြန်ကြောတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြင့် ဖြစ်ပွားသည်။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် အသည်းပြည်တည်နာရောဂါကိုရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရန် ultrasound ရိုက်ခြင်း (အသည်း၏ ပုံရိပ်များကိုရယူရန် အသံလှိုင်းများအသုံးပြုခြင်း) ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။
CT scan ရိုက်ခြင်းနည်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပဋိဇီဝဆေးဖြင့် ကုသမှုသည် မထိရောက်ပါကဆရာဝန် သည် အပ်ဖြင့် ဝမ်းဗိုက်တွင်းထိုးသွင်းကာတစ်ရှူးစယူခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုတစ်ရှူးစကိုအဏုကြည့်မှန်ပြောင်း ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ တိကျသောအကြောင်းရင်းကိုသိပါကအစားထိုးကုသမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Liver Abscess (အသည်းပြည်တည်နာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အကောင်းဆုံးကုသမှု နည်းလမ်းသည် ပြည်များကိုဖယ် ထုတ်ပြီးပဋိဇီဝဆေးများပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လူနာအများစုသည် ပဋိဇီဝဆေး ၂ မျိုး ၃မျိုးလောက် လိုအပ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ပဋိဇီဝဆေးများကိုအဖျားနှင့် ရောင်ရမ်းမှု မပျောက်မချင်းအကြောထိုးဆေးအနေဖြင့် ပေးရပါသည်။ ဆရာဝန်သည် အသည်း ပြည်တည်နာထဲသို့ အပ်ဖြင့် ထိုးသွင်း ပြီးရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုစုပ်ထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင် ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းသည် အသည်း ပြည်တည်နာကိုကုသရာတွင် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် အသည်း ပြည်တည်နာကိုထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
Pyrogenic liver abscess ဖြစ်သောလူအများစုသည် ပဋိဇီဝဆေးများသောက်ခြင်း၊ ပြည်ထုတ်ယူခြင်းတို့ပြုလုပ်ရင်း ၂ပတ်အတွင်းတွင် သက်သာလာပါသည်။ အမီးဗားကြောင့် ဖြစ်သောအသည်း ပြည်တည်နာတွင် ကုသမှု ၄-၅ ရက်အတွင်းဖျားနာ ခြင်းသက်သာနိုင်ပါသည်။ ရောဂါတိုးတက်မှု ကိုတားဆီးရန် ဤ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိစ္စများကို ပြုလုပ်ရပါ မည်။
ဆရာဝန် မှာသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဆေးစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ အသား ဝါခြင်းတို့ဖြစ်ပါကဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက် သွယ်ပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print
Edition. Page 319
Pyogenic liver abscess.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000261.htm.October 05, 2015Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print
Pyogenic liver abscess.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000261.htm.October 05, 2015